ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌထံသို့ ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီမှ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ လာရောက်ပေးအပ်
၂၀၁၅ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်အမှုအခြေပြဇယား
တစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့် ကဏ္ဍစုံမှ ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး အမေ ရိကန် နိုင်ငံ Stanford တက္ကသိုလ်၊ နိုင်ငံ တကာ မူဝါဒများ လေ့လာ ရေး မဟာ ဌာနမှ ပါမောက္ခ James Fearon နှင့် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ များအား လက်ခံ တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန် သံရုံးမှ နိုင်ငံရေးနှင့် စီပွားရေး ဆိုင်ရာသံမှူး Ms. Corinne Henchoz Pignani အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး International Republican Institute ၏ ဥက္ကဋ္ဌ သံအမတ် ကြီးဟောင်း Mr. Mark Green နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဂျပန် သံအ မတ်ကြီး Mr. Tatechi HIGUCHI အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ National Defense University (NDU) မှ လေ့လာရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး UNITED STATES INSTITUTE OF PAECE (USIP) ဥက္ကဋ္ဌ Ms.Nancy Lindborg အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အသိ ပညာပေး သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၅) ဖွင့်ပွဲ အခမ်း အနားသို့ တက်ရောက် အမှာ စကား ပြောကြား
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် လူမှု အဖွဲ့အစည်း များ အကြား ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှု ဆိုင်ရာ အစည်း အဝေး ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ အကြား ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှု ဆိုင်ရာ အစည်း အဝေး ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးတွင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အသိပညာပေး သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃/၂၀၁၅)ဖွင့်လှစ်
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးမှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အသိပညာပေးသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၄/၂၀၁၅) ဖွင့်လှစ်
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဥရောပ သမဂ္ဂ သံအမတ်ကြီး H.E Mr. Roland Kobia နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်(ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)၏သတင်းအချက်အလက်ဌာန ဖွင့်လှစ်ခြင်းအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တူရကီသံအမတ်ကြီး H.E. Mr.Murat Yavus Ates အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် သို့ National Enlightenment Institute ( အမျိုးသား ခေတ်သစ် အဖွဲ့ အစည်း) မှ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ များ လာရောက် လေ့လာ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးDFID Country Programmes In Asia မှ Director General Ms. Joy Hutcheon နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စင်ကာပူသံရုံးမှ ဒုတိယအကြီးအကဲ Mr. Koh Chee Chian အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့်NIMD & DEMO FINLAND အဖွဲ့တို့ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ MoU လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ Myanmar Egress အဖွဲ့မှ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ လာရောက်လေ့လာ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေး မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး သင်တန်းကျောင်း(Myanmar School of Politics) တက်ရောက် ခဲ့သည့် သင်တန်းသား ဟောင်းများ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြား
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး နယူးဇီလန်နိုင်ငံသံရုံးယာယီတာဝန်ခံ Mr. Mike Burrel နှင့်အဖွဲ့ အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ် ဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေး ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် မဲပေးရေးအစီအစဉ်များတွင် မသန်စွမ်းသူများ ပိုမိုပါဝင်ခွင့် ရရှိလာရေး ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြား
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး H. E. Mr. Derek Mitchell နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံ ရေးပါတီ များနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်လောင်း များ အတွက် ကျင့်ဝတ် များ လက်မှတ် ရေးထိုးပွဲ အခမ်း အနား ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Andrew Patrick နှင့်အဖွဲ့ အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး UNDP ဌာနေ ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr. Toily Kurbanov နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံပြီး ဂျပန်နိုင်ငံမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်သုံး မီးအိမ် လှူဒါန်းခြင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနာ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး မိုးရာသီ သစ်ပင် စိုက်ပျိုးပွဲ အခမ်းအနား တက်ရောက်
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် သို့ ရွေးကောက်ပွဲ ပညာပေးရေးနှင့် လေ့လာ စောင့်ကြည့်ရေး မိတ်ဖက်များ ( မြန်မာပြည်) အဖွဲ့များ လာရောက် လေ့လာ
၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အသိပေး ကြေညာချက်
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး USAID မှ အာရှ ဒေသ ဆိုင်ရာ လက်ထောက် အုပ်ချုပ် ရေးမှူး Mr. Jonathan Nicholas Stivers၊ မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အမေ ရိကန် သံ အမတ်ကြီး H.E. Mr. Derek Mitchell နှင့် အဖွဲ့ အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေး ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အသိပညာပေးသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၅) ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် (၈) ဦး ထပ်မံ ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခြင်း